Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း)
Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ရင်ဘက်ရိုးနဲ့နံရိုး ဆက်တွယ်ပေးထားတဲ့ အရုးနုရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ထိုရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ရတဲ့ နာကျင်မှုက နှလုံးဖောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် တခြားနှလုံးရောဂါတွေနဲ့ဆင်တူနိုင်ပါတယ်။
နာကျင်မှုက သာမန်လောက်ကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သာမန်အခြေအနေမှာဆိုရင် ရင်ဘတ်ကို ထိမိ၊ ခိုက်မိမှ နာကျင်သွားတာမျိုးဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကတော့ လက်တွေ၊ ခြေတွေထိ ပျံ့ဆင်းသွားတဲ့နာကျင်မှုမျိုး၊ နေ့စဉ်ဘဝကိုတောင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့ မခံနိုင်လောက်တဲ့ နာကျင်မှုမျိုးဖြစ်တယ်။
ထိုအရိုးနုရောင်ခြင်းက သူ့အလိုလိုပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ပျောက်ဖို့ကတော့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် ဒါမှမဟုတ် ပိုပြီးကြာနိုင်တယ်။ ကုသမှုက နာကျင်မှုကိုသက်သာဖို့ပဲ ဦးတည်ပါတယ်။
Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အလွန်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အသက် ၄၀ ကျော်သူတွေမှာ ပိုပြီးတွေ့ရတတ်တယ်။ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
စူးရှပြီး တစ်ဆစ်ဆစ်နာခြင်း ဒါမှမဟုတ် တင်းကြပ်စွာ ဖိအားတစ်ခုခုဖိထားသလိုနာခြင်းဖြစ်တယ်။
အသက်ပြင်းပြင်းရှူတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ပိုဆုးတတ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းလကဏာတွေဖြစ်တဲ့ နံရိုးအဆစ်များမှာ နီရဲခြင်း၊ ပြည်တည်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေဖြစ်လာပါက
Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြောင်းအရင်းအတိအကျမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့်တော့ အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ် –
ထိခိုက်ခြင်း – ဥပမာ- ရင်ဘတ်ကိုထိုးမိခြင်း။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်များ – အလေးပင်မခြင်း၊ ပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆိုးရွားသောချောင်းဆိုးခြင်းများ။
အရိုးရောင်ခြင်း – အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း၊ လေးဘက်နာ စသည်တို့နဲ့လည်းဆက်နွယ်နေနိုင်တယ်။
အဆစ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း – TB, ကာလသားရောဂါပိုး၊ aspergillosis စသည်တို့ကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၊ ဘတ်တီးရီုးယား၊ မှိုများ။
အကျိတ် – ကင်ဆာဖြစ်စေ၊ ကင်ဆာမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ အရိုးနုရောင်စေနိုင်တယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့တခြားနေရာတွေ၊ ရင်သား၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း၊ အဆုတ် တို့ဆီ ပျံ့သွားနိုင်တယ်။
Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Reiter ရောဂါ – တုံ့ပြန်မှုများအဆစ်ရောင်ခြင်းရောဂါ။
Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ၊ ရောဂါရာဇဝင်၊ မိသားစုတွင်းရောဂါရာဇဝင်များပြောရ၊ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှုကတော့ နံရိုးများကို စမ်းသပ်ပြီး နာကျင်မှုအတိုင်းအတာကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းရှိမရှိလည်း ရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
အရိုးနုရောင်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့နာကျင်မှုဟာ နှလုံးရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ အစာအိမ်အူရောဂါ၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ မှားနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပုံရိုက်ကူးစစ်ဆေးခြင်း၊ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းများ အတိအကျမရှိပေမယ့် တခြားဖြစ်နိုင်ချေတွေကို ပယ်ထုတ်ဖို့အတွက် ဓါတ်မှန်၊ စီတီစကမ်၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်တွေရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Costochondritis (နံရိုးထိပ်ရှိအရိုးနုရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Ibuprofen, naproxen sodium စသည်ကဲ့သို့ သာမန်အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သော ဆေးဝါးများအပြင် ဆရာဝန်က ပိုပြင်းတဲ့ စတီးရွိုက်မပါသောအရောင်ကျဆေးညွှန်းနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်နံရံ နဲ့ ကျောက်ကပ်ကိုတော့ အနည်းငယ်ထိုခိုက်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
Narcotics – နာကျင်မှုကဆိုးရင်တော့ ကိုဒင်းတချို့ပါတဲ့ဆေးမျိုး ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအတွက်ဆေးများ – ညဘက်နာကျင်မှုကြောင့်လန့်နိုးတဲ့အခါ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
အတက်ကျဆေး – gabapentin (Neurontin) ဟာ နာတာရှည်နာကျင်ခြင်းတွေအတွက် သက်သာစေပါတယ်။
အကြောလျှော့ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း – ရင်ဘတ်ကြွက်သားများကို ဖြေလျှော့ခြင်းဖြင့် အကူအညီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာရုံကြောလှုံ့ဆော်မှုများ – လျှပ်စီးဓါတ်ဖြင့် အာရုံကြောလှုံ့ဆော်ခြင်းနည်းတစ်နည်းဖြစ်တယ်။ နာကျင်တဲ့နေရာဝိုက်က အရေပြားပေါ်မှာ ကပ်ခွာလေးများဖြင့် လျှပ်စီးဓါတ်ပို့လွှတ်ပြီး ထိုဓါတ်က နာကျင်မှုအာရုံ ဦးနှောက်သို့ရောက်ခြင်းကိုတားပေးတာဖြစ်တယ်။
တခြားနည်းလမ်းများအဆင်မပြေပါက နာကျင်သော အဆစ်တဝိုက်သို့ စတီးရွိုက်တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းကုသပါလိမ့်မယ်။
အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော စတီးရွိုက်မပါသည့် အရောင်ကျဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ စသည်။
ရေနွေးကပ်ခြင်း သို့ ရေခဲကပ်ခြင်း – နာကျင်ကိုက်ခဲသည့်နေရာကို ရေနွေးအိတ် သို့ ရေခဲအိတ်ကပ်ပေးခြင်းကလည်း အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။
မလိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများရှောင်ရှားခြင်း – လက္ခဏာများမသက်သာသည်ထိအားကစားများ မလိုအပ်သောလှုပ်၇ှားမှုများရှောင်ပါ။ ထို့နောက်မှာလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိသလောက်သာ ပြန်လည်လှုပ်ရှားပါ။
Costochondritis. http://www.healthline.com/health/costochondritis. Accessed January 12, 2017
Costochondritis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/costochondritis/basics/lifestyle-home-remedies/con-20024454. Accessed January 12, 2017
Costochondritis. http://www.webmd.com/pain-management/costochondritis#4. Accessed January 12, 2017